Toddobaad Ayuu Qolkiisa Ka Dhex Ooyayey Markii Uu Ka Tegayey Barcelona - GOOL24.NET
Toddobaad Ayuu Qolkiisa Ka Dhex Ooyayey Markii Uu Ka Tegayey Barcelona
Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee dunida usoo baxaysa, waana hanti ay PSG si fudud kaga qaadatay Barcelona oo uu isaguna si dhib badan kaga tegay.
Xiddiga da’da yar ee Xavi Simone ayaa go’aansaday inuu ka tago Barcelona sannadkii 2019 isaga oo si bilaash ah ugu wareegay kooxda reer France ee Paris Saint-Germain. Heshiiskiisa waxa dhiirigeliyey lacag badan oo loo ballan-qaaday.
Barcelona ayaa ku eedaysay PSG inay ciyaartoygeedan ku jiidatay arrimo dhaqaale, hase yeeshee kooxda Faransiiska ayaa iyadana ay u ahayd farxad inay helaan Xavi Simons oo dadka ciyaaraha aqoonta u leh ay u saadaalinayaan inuu noqon doono calaamad dib usoo celisa kubaddii, haybaddii iyo magacii ciyaartoyda kasoo jeeda waddanka Netherlands/Holland.
18 jirkan waqti badan ayay ku qaadatay markii uu gaadhay go’aanka uu kaga baxayo Barcelona iyadoo ay waqtigaas da’diisu ahayd 15 jir, waxaana uu kala tashaday qoyskiisa iyo wakiilkiisa oo kasoo shaqeeyey sidii uu ugu wareegi lahaa PSG.
Xiddigaha waaweyn ee PSG sida Lionel Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe ayaa uu tababarka la qaataa, waxaanu kasoo muuqday kulamada qaarkood. Kulankii Lyon iyo PSG ee toddobaadkii hore ayaanu ciyaaray.
Ferney Agudelo oo ay saaxiib dhow yihiin Simons ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in laacibkani uu lacag darteed uga tegay naadiga, waxaana uu ku dooday inuu aad u jeclaa inuu sii joogo Camp Nou.
Waraysi uu siiyey wargeyska L’Equipe ayuu Ferney Agudelo ku yidhi: “Sababta uu uga tegay ma ahayn lacag. Laakiin way iska caddayd inuu doonayay jawi ku habboon, waxaanu ka fikiray mashruuc ciyaareed oo kale.
“Xavi Simons waxa uu maalin walba diiradda saaraa sidii uu u horumarin lahaa kubaddiisa cagta, laakiin Barcelona waxay awoodi weyday inay u samayso damaanad-qaad ku saabsan doorkiisa. Haddii wax walba ay wax walba sida ugu fiican u socdaan, waxa uu kualnkiisa koowaad u ciyaari lahaa kooxda koowaad ka hor intii aanu 18 jir noqon.”
Markii uu ka tegayay Barcelona muddo toddobaad ah ayuu qol ka dhex ooyayay, waxa uu sheegay Agudelo, waxaanu yidhi: “Qofka ay dhibaatada ugu badan gaadhay wuxuu ahaa Xavi Simons.
“Toddobaadkii uu go’aansaday inuu tago, waxa uu ku qaatay qolkiisa oo uu ka ooyayey.”